Madaxweyne Farmaajo oo dib u dhigay kulan ay maanta yeelan lahaayeen xildhibaannada Golaha Shacabka | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo dib u dhigay kulan ay maanta yeelan lahaayeen xildhibaannada...
War naga soo gaaray madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu baajiyay kulan xasaasi ah oo ay maanta yeelan lahaayeen xildhibaannada Golaha Shacabka.
Agaasimaha Madaxtooyada Villa Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa xaqiijiyay in la hakiyay kulankii Baarlamaanka ee maanta loo balansanaa, kaddib soo jeedin ka timid Madaxweynaha.
Wararka ayaa sheegaya kulanka loo baajiyay si looga fogaado dhibaato ka dhalan karta fadhiga Golaha marka ay isugu taggi lahaayeen xildhibaanno siweyn ugu kala aragti duwanaa Ajandaha kulanka.
Xildhibaanno xalay ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya in uu ku guuldareystay waajibaadkii loo doortay, iyaga oo sheegay in mooshinkan bilaawday noqon doonin mid halkan ku dhamaada ilaa sida ay hadalka u dhigeen uu madaxweynaha xilkiisa ku waayo.
Guddoomiye ku-xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in uu madaxweynuhu qeyb ka yahay sida uu hadalka u dhigay weerarka lagu soo qaaday Baarlamaanka Soomaaliya wax badanna ka ogyahay ciidamada la dul dhigay xarunta.
Laakiin dhinaca kale xildhibaannada Mooshinka ka keenay guddoomiye Jawaari ayaa wali ku adkeysanaya in mooshinkii taagan yahay lagana doodi doono.
Inkastoo kulanka maanta uu baaqday haddana lama oga tallaabada xigta ee uu qaadi doono madaxweynaha oo hadda u muuqda in uu si toos ah u soo fara-galiyay xiisada siyaasadeed ee ka dhax aloosan xildhibaannada Golaha Shacabka.